Nalonetardiary - Page 27 of 30 - Media and Entertainment
ရုံးပိတ်ရက် နေရပ်ပြန်ဝန်ထမ်းတွေQuarantine ၂၁ ရက်ဝင်ပြီးမှသာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်
April 18, 2020 Nalonetar Diary 0
ရုံးပိတ်ရက် နေရပ်ပြန်ဝန်ထမ်းတွေQuarantine ၂၁ ရက်ဝင်ပြီးမှသာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် နေရပ်ပြန်ဝန်ထမ်းတွေသတင်းအချက်အလက်အမှန်မပို့ဘဲ Quarantine ဝင်ဖို့ရှောင်လွှဲရင် အရေးယူခံရမှာပါ။ မဟာ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်းမှာ နေရပ်ပြန်သွားတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းအားလုံး မိမိတာဝန်ကျရာနေရာကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ရင် Quarantineဝင်ပြီး စောင့်ကြည့်ခံရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ချက်ချင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဦးမှာမဟုတ်ဘဲ အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Facility Quarantineနေရာတွေမှာ […]
အတည်ပြုလူနာ (6)ဦးထက်တွေ့ တစ်ဦး သေဆုံး
C0V I D-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၈-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ ၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) သည် (၁၇-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ပေးပို့လာသော C0[…]
ဆရာတော် ဘုန်းကြီး အိမ်မက်ပေးလို့ ဘုရားကျောင်းဆောင် အောက်တည့်တည့်က မြေကြီးကိုတူးကြည့်သောအခါ
April 17, 2020 Nalonetar Diary 0
ဒီ‌မနက်ကျနော်အိပ်ယာနိုးတော့ တစ်ရွာလုံး အုံးအုံးကြွပ်ကြွပ် ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျနော့်အိမ်မှာလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလို့ အိမ်ကလူတွေကို အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ကျနော်မေးလိုက်တော့, ကိုယ့်အိမ်က ဘုရားကျောင်းဆောင်အောက်တည့်တည့်မှာ မီးသွေး‌တူးနေကြတာတဲ့။ ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့, ရေစိမ်သောက်ဖို့တဲ့။ ဘယ်သူကပြောတာလဲဆိုတော့,ဘယ်ရွာကဆရာတော်ဆိုလား၊ဘုန်းကြီးဆိုလား ညက အိပ်မက်မက်လို့တဲ့။ ကိုယ့်အိမ်က ဘုရားကျောင်းဆောင် အောက်တည့်တည့်က မြေကြီးကိုတူးကြည့်ရင် မီးသွေးခဲလေးတွေ တွေ့လိမ့်မယ်တဲ့၊ အဲ့ဒါကို ရေစိမ်သောက်တဲ့ […]
ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးခြင်းသည်သာ အထိရောက်ဆုံး လက်စားချေခြင်းပါ
ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးခြင်းသည်သာ အထိရောက်ဆုံး လက်စားချေခြင်းပါ “ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေကို ဘယ်လို ခွင့်လွှတ်ပေးမလဲ”။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဒီအဖြေကို ဖြေဖူးပါတယ်။ “တကယ်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါပဲ။ ကိုယ့်နှလုံးသားလေးကို ဖြူစင်မြဲဖြူစင်နေအောင်ထားပါ။ စိတ်တံခါးတွေကို ဖွင့်လှစ်ထားလိုက်ပါ” တဲ့။ စိတ်နှလုံးကို အမြဲတမ်းသန့်စင်ကြည်လင်အောင် ထားခြင်းက ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးအတွင်းက […]
၂၀ရက်နေ့ အလုပ်တွေပြန်ဆင်းကြရင် ဘယ်လိုစီမံရမလဲ ဘယ်လို လုံခြုံမှုတွေပေးမှာလဲ
၂၀ရက်နေ့ အလုပ်ပြန်ဆင်းကြရင် ဘယ်လိုစီမံရမလဲ ဘယ်လို လုံခြုံမှုတွေပေးမှာလဲ ကျွန်တော် HR တစ်ယောက်ပါ ဒီစာကို အလုပ်ရှင်မြင်လည်း မတတ်နိင်ပါဘူး.. ၂၀ရက်နေ့ အလုပ်ပြန်ဆင်းကြရင် ဘယ်လိုစီမံရမလဲဆိုတာတွေက HRပညာရှင်တွေ၊အလုပ်ရှင်တွေအတွက် တော်တော်လေးကိုခက်ခဲစွာဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စပါ ပညာရှင်တွေဘယ်လိုပဲပြောပြော လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက် အကြံဉာဏ်တွေက တကယ့်လက်တွေ့မှာ တချို့သောလုပ်ငန်းတွေအတွက် အသုံးမဝင်ပါဘူး ဥပမာ […]
အချစ်တို့ရေ…. မရမ်းသီး သနပ်လေး လုပ်နည်း သိတဲ့သူတွေ ရှိသလို မသိတဲ့သူတွေအတွက်.. အိမ်မှာ လုပ်တဲ့ လုပ်နည်းလေး ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်…. တနှစ် စာပတ်လုံး အထားခံသော နည်းလေးပါ… အရင်ဆုံး..မရမ်းသီးများကို ရေစိမ်ထားပါ ပြီးရင် လိုသလိုလေး တုံး ပါ အစေ့များ ထုတ်ပြီး..ရေ သန့်စင်အောင်ဆေးပါ ရေဆေးထားသော […]
သာမညဆရာတော်ကြီး၏ ပေးခဲ့သော ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ လာဘ်ပိတ်သူတို့ လာဘ်ပွင့်စေသော ပုတီးစိပ်နည်း
သာမညဆရာတော်ကြီး၏ ပေးခဲ့သော ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ လာဘ်ပိတ်သူတို့ လာဘ်ပွင့်စေသော ပုတီးစိပ်နည်း သာမညဆရာတော် ဘုရားကြီးချီးမြှင့်ခဲ့သော အချိန်အခါ ရွေးနည်းတွင် နေ့တစ်နေ့ကို အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ကောင်းသောအချိန်နှင့် မကောင်းသောအချိန် အကြမ်းဖျင်းခွဲခြားထားပါသည်။ ငွေကြေးဓနနှင့် ဆိုင်သော စန်းနက္ခတ်တို့ ဖြစ်ထွန်းအားကောင်းသော *မုဆိုးရွှေအိုးရကိန်း*အချိန်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် နံနက် […]
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့် ထုတ်ပြန်ချက် လူ ၅ ဦးထက် ပို၍ စုဝေးလျင် ဥပဒေအရ အရေးယူမည်
April 16, 2020 Nalonetar Diary 0
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့် အမှတ် ၃၇/၂၀၂၀ လူ ၅ ဦးထက် ပို၍ စုဝေးခြင်းကို ပိတ်ပင်သည်။ အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များမှ လွဲ၍ လူ (၅) ဦး ဖြစ်စေ၊ (၅) ဦး အထက် ဖြစ်စေ စုဝေးခြင်း မပြုရ။ ၁- အစိုးရအဖွဲ့မှာ […]
ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ အုန်းထမင်းချက်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖျာပုံပေါ်ဆန်း နို့ဆီဘူး ၂ ဘူး အုန်းနို့ ၁ ဘူး (၂၅၀ ml) သကြား ဇွန်း ၂ ဇွန်း ဆား လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ ဇွန်း ဆီ ဇွန်း ၁ ဇွန်း ကြက်သွန်နီ […]
မြန်မာတွေက စေတနာကောင်းတယ် ကျန်းမာရေးအသိနည်းပါးတော့ ..
ဈေးထဲကပြန်ထွက်လာသူက အပြင်မှာ ဝင်မရလို့ ရွာလည်နေတဲ့သူကို ဟယ်… နှာခေါင်းစည်းမပါလို့ မဝင်ရတာလား၊ ရော့.. ငါ့ဟာတပ်သွားဆိုပြီး သူတပ်လာတာ ဖြုတ်ပေး၊ အေး.. အေး… ကျေးဇူးပဲဆိုပြီး တဆင့်ယူတပ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါမျိုး လေး ငါး ခြောက်ယောက်တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျမတို့ပြည်သူတွေဘဝ တအားကိုသနားစရာကောင်းလွန်းတယ်။ ဥစ္စာဓန နည်းပါးကြတာတင်မက ကျန်းမာရေးအသိပါနည်းပါးကြတော့ စိတ်မကောင်းရုံကလွဲလို့ […]
လက်သန်းလေးကသိနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား